Blog - Active IT
Programmer တစ်ယောက်အဖြစ်အသက်မွေးတော့မယ်ဆိုရင် – ၂
by thantsin | Aug 21, 2019 | Development
Programming Language တစ်ခုအား လေ့လာရာတွင် တွေ့ရသည့် အခက်အခဲများ Programmer တစ်ယောက် အဖြစ်အသက်မွေးတော့မယ် ဆုံးဖြတ်ပြီးလို့ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ Platform နဲ့ အလုပ်လုပ်လို့ရမယ့် Language ကိုရွေးချယ်ပြီးပြီဆိုရင် ပထမဆုံးလုပ်ရတာကတော့ အဲ့ Programming Language...
by thantsin | Jun 23, 2019 | General
ကျွန်တော်မှန်းတာ မမှားရင် ခင်ဗျားအနေနဲ့ အိုင်တီဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ကြားဖူး မြင်ဖူးတာ မနည်းလောက်တော့ဘူး.. မြင်ပါများလို့ တစ်ယောက်ယောက်က ပြောလိုက်ရင် အော် အိုင်တီ များကွာလို့တွေးပြီး ကွန်ပျူတာတွေ၊ ဖုန်းတွေ ခေါင်းထဲတောင် ပေါ်ရင်ပေါ်လာလောက်တယ်.. ဒီတော့ ကျွန်တော်က...
နည်းပညာလောကမှ ပြဿနာ အရှာနိုင်ဆုံးလူများ
by thantsin | Jun 20, 2019 | General
Steve Wozniak Apple ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Steve Wozniak ရဲ့ အပြောင်အပျက်လုပ်မှု အများစုဟာ သူ့ ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်းကြားမှာသာ အသိများပေမဲ့ နည်းပညာလောကက ဆရာကြီးတစ်ဆူ ဖြစ်တဲ့သူဟာ နည်းပညာကို အသုံးပြုပြီး အပြောင်အပျက်တွေလုပ်ခဲ့တာတွေလည်း မနည်းလှပါဘူး။ နိုင်ငံခြားကို...
ခုရက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဆီ မကြာခဏလာမေးလေ့ရှိတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုက လုပ်ငန်းခွင် ခုမှစဝင်မှာမို့ ဘယ်လို ကွန်ပျူတာ သင်တန်းတွေတက်ရင် အလုပ်အကိုင်အတွက်အခွင့်အလမ်း ကောင်းမလဲဆိုတာပါ.. အဲ့ဒီ့မေးခွန်းက တော်တော်ဖြေရကျပ်တဲ့မေးခွန်းပါ.. ကွန်ပျူတာ သင်တန်းဆိုတာက မူလတန်း...
အိုင်တီသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ ကွန်ပျူတာအခြေခံကို ဘယ်လိုလေ့လာသင့်သလဲ ?
ဟိုတနေ့ က ညီတစ်ယောက် လာမေးထားပြီး တခြားလူတွေလည်း မေးလေ့ရှိလို့ပါ.. အိုင်တီသမားအဖြစ် အသက်မွေးမယ်ဆို အခြေခံအဆင့်မှာ ဘာတွေကိုလေ့လာသင့်သလဲဆိုတာ.. ကျွန်တော့်အမြင်အရ အိုင်တီ သမားအဖြစ် အသက်မွေးမှရယ်မဟုတ်ဘူး ကိုယ်က နေ့တိုင်း ကွန်ပျူတာတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ရမယ့် အလုပ်မျိုး (Graphic...
Computer Hardware တွေကို ဘာကြောင့်လေ့လာသင့်သလဲ ?
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ကွန်ပျူတာနဲ့ နေတိုင်းထိတွေ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့လူအများစုဟာ Computer Hardware တွေကို လေ့လာတာဟာ ဆားဗစ်စင်တာတွေက တက်ကနစ်ရှန် တွေအလုပ် ငါတို့သိဖို့မလိုဘူးရယ်လို့ ယူဆထားလေ့ ရှိတယ်.. နောက်ဆုံး အိုင်တီသမားစစ်စစ်ရယ်လို့ ပြောရမယ့် Programmer တချို့ဆီမှာတောင်အဲ့လို...
IT Professional ဖြစ်ချင်သူများအတွက်
ကျွန်တော့်ဆီ စာလာမေးကြတာတွေထဲမှာ မဲပြာပုဆိုးလို ဆီသည်မလက်သုတ်လို ဖန်တရာတေနေတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်က ကျွန်မက IT Professional ဖြစ်ချင်တာ ဘယ်က စသင်ရမလဲဆိုတာပါ… IT သမားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ ဘာသင်ပြီး ဘာဆက်သင်လို့ တန်းပြောလို့မရဘူး. ကိုယ့်ဘာသာ...
by thantsin | Jun 7, 2019 | Classes
ကျွန်‌‌တော်တို့ဆီ သင်တန်းလာစုံစမ်းကြတဲ့လူတွေ ‌အ‌‌‌မေးများတာ တစ်ခုကတော့ ဘာအတန်း‌‌တွေရှိလဲ .. ဘာ‌‌တွေသင်မှာလဲ ဆိုတာ‌တွေပါပဲ.. အဲ့တော့ကွန်ပျူတာကို ခုမှ စလေ့ာလာဖို့ စိတ်ကူး‌‌နေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာ အခြေခံအဆင့် သင်တန်းက နှစ်ခုရှိပါတယ်.. တစ်ခုကတော့ ‌Computer...
Programmer, Programming နှင့် Program (Software) ဘာကွာသလဲ ?
by thantsin | May 28, 2019 | Developer, Development
Programming ဆိုတာဘာလဲ? Programming နဲ့ Software ဘာကွာသလဲ စသည်ဖြင့် ကျွန်တော်တို့ Page မှာလာလာမေးကြတဲ့အတွက် ဒီနေ့ တော့ Programming, Programmer, Program စတာတွေ ကြားမှာဘာကွာခြားလဲဆိုတာ ကျွန်တော် တက်နိုင်သလောက် ရှင်းပြသွားပါမယ်. Program (Software) Programming ဒါမှမဟုတ်...
တနေ့က ကျွန်တော်တို့ဆီ လာမေးလို့ပါ Operating System ဆိုတာဘာလဲတဲ့? ကျွန်တော့်အနေနဲ့ တန်းခနဲ ဖြေပေးချင်ပေမဲ့ Hardware နဲ့ Software ကိုမှ ကွဲကွဲ ပြားပြားနားမလည်ဘူးဆိုရင် Operating System ကို ရှင်းပြလည်း နားလည်ဖို့ မလွယ်လောက်ပါဘူး.. အဲ့တော့ အရင်ဆုံး သိထားသင့်တဲ့ Hardware...